२८ पुस, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पार्टी फुटले बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा नसोचेको अवरोध आएको बताएका छन् । तर, आफूहरुको अभियान नरोकिने प्रष्ट पारे ।
पार्टीका संयोजक मध्येका एक उज्वल थापासहित १६ जनाले विवेकशील नेपाली दल दर्ताका लागि शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
पार्टी फुटपछि शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक मिश्रले पार्टीमा विमती भएपनि अनायाश छोडेर जान्छन् भन्ने भन्ने नलागेको बताए ।
यद्यपि बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण अभियान नरोकिने प्रष्ट पारे । उनले भने, यो यात्रा कुनै हालतमा रोकिँदैन । साथ दिने साथीहरु देशभर हुनुहुन्छ ।’
छोडेर जाने साथीहरुले लगाएको आरोपहरुले असाध्यै दुःख लागेको विवेकशील साझा संयोजक मिश्रले बताए । उनले अघि भने, ‘त्यसैगरी मैले पनि आरोप लगाएँ भने धेरै आरोपहरु लगाइनसक्छ । तर त्यस्तो हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने पक्षमा छैन । तपाईहरुले बेस्कन उक्साउनुभयो पनि म त्यो काम गर्दिन ।’
यद्यपि पार्टीमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्ने आरोप सही नभएको उनले बताएका छन् ।
बरु पार्टीका अर्का संयोजक उज्वल थापाले विधि प्रक्रिया मिचेर समिक्षा प्रतिवेदन लेखेको उनले बताए । यसका बाबजुद ३० गते सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेण्डा बनाएको अवस्थामा पार्टी छाडेर जानु दुःखद भएको उनले बताए ।
उज्वल थापालाई रविन्द्र मिश्रको प्रेमपत्रः नयाँ यात्राका लागि शुभकामना !
२८ पुस, काठमाडौं । उज्जव थापाको नेतृत्वमा पार्टी फुटाएपछि विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ, जसले उनले छु्टिटएका मित्रहरुलाई प्रेमपत्र नाम दिएका छन् ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बदमासी: हस्ताक्षर सांसदकै, पुर्जी छोरालाई
हेर्न पाइने भयो राजाले लगाउने श्रीपेच
जिप्रका दाङले दियो सार्वजनिक विदामा पनि सेवा
पूर्वउपसभामुख सुवेदीले यसरी गरिदिईन् बुहारीको बिहे
उफ् काठमाडौंमा कोठा पाउन कस्तो गाह्रो !
प्रहरीमा जागीर लगाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने भूपू प्रहरी पक्राउ
सल्यानमा घर भत्किँदा एकै परिवारका ५ जनाको मृत्यु
आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी : भगवान श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी मनाइँदै